Iindaba - Iintente zokulima zityalwa ukunceda abalimi ukuvuna izityalo kumaqondo obushushu afanelekileyo
Ukuphepha amaqondo okushisa aphezulu ngumngeni ojongene nabalimi abaninzi bangaphakathi, nangona ingxaki inokujongwa ngeendlela ezahlukeneyo. Nazi ezinye zezona ndlela zisebenzayo onokuthi ugcine ubushushu obugqibeleleyo kwintente yakho ekhulayo yokukhula kwezityalo. Umoya omdaka
Ngokulula njengoko kuvakala, ukusebenzisa ikharbon diokside kunokuba yingozi kakhulu, njengoko inceda kuphela xa idlula ubushushu obuqhelekileyo bokukhula kweentente. Ukusuka kwi-biology esisiseko, sonke siyazi ukuba i-carbon dioxide ibalulekile kwi-photosynthesis yezityalo, ngoko ke yintoni ebamba ngayo xa unyusa amanqanaba e-carbon dioxide ukutyala amanqanaba entente kwaye uncede ukwenza ngokufanelekileyo kwisityalo sonke, ngaloo ndlela ugcine umsebenzi oqhelekileyo nakwiimeko ezishushu.
Isibane esipholileyo somoya
Indlela yokwenza esi senzo ilula kakhulu, ekuphela kwayo kukusebenzisa isixhobo sokutsala umoya ukutyhala umoya kwisibane, emva koko usebenzise ialuminiyam okanye imibhobho egqunyiweyo ukususa umoya oshushu kwintente yakho yokukhula. Ingoma yesandi ingcono kune-aluminiyam kuba ipholisa ngakumbi kune-aluminiyam. Ngoko ke, kukho konke, isibane esipholileyo somoya siqulethe iglasi ephantsi eyenza indawo efanelekileyo yomoya. Umoya opholileyo ukhutshwa ngala mijelo kwaye uchitha ubushushu phezu kwesibane.
Ukukhuthaza ukuhamba kakuhle komoya
Kubalulekile ukuqinisekisa ukujikeleziswa komoya kangangoko kwintente ekhulayo ukuthintela iindawo ezishushu. Oku kuya kuqinisekisa ukuba izityalo zakho zikhula zisempilweni kwaye amagqabi kunye neziqu zikhula zomelele. Qinisekisa ukuba utyalomali kwi-oscillating fans okanye unabalandeli abaninzi, ukutshintshisana kwezalathiso ukususela ekufumaneni amagqabi kwiindlela ezahlukeneyo kuyimfuneko, njengoko le kopi yentshukumo yendalo kwindawo yangaphandle ikholelwa ngakumbi ukuba isitshixo kukuba nentente yabalandeli kuzo zonke iikona. yokukhula kwakho.
Igumbi elifakwe kakuhle lihlala linceda ukulawula ukushisa kwentente ekhulayo, njengoko ingasekelwe kwiimeko zendalo zangaphandle. Kwezinye iimeko, ukukhanya kusenokuba ngoyena nobangela wokutshisa okuyingozi, nangona kwiimeko ezininzi oku kusenokuba ngenxa yokungangeni kakuhle, ngakumbi ukuba unentente yokutyala ebekwe ngqo phantsi kophahla olushushu. Ukugquma komhlaba yindlela epholileyo kuba umhlaba ubonelela ngokugquma kwendalo. Ke ukuze upholise intente yakho, unokufuna ukucinga ngokulivalela wedwa igumbi lakho.